Ajụjụ ọnụ Dolores Redondo, onye mmeri nke onyinye Planeta 2016 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Berkwụ Alberto | | Ajụjụ ọnụ, Akwụkwọ
Dolores Redondo, onye ritere ihe nrite 2016 Planeta. © La Portada Mex.
Mgbe o rere ihe karịrị narị puku asaa Baztán trilogy, Dolores Redondo (San Sebastián, 1969) nọchiri ndị nna maka nna ochie, Navarra maka Galicia na anwansi mara nke ọma maka ọzọ jupụtara na taboos sitere na ala Galician. A na-akpọ akwụkwọ mmeri 2016 Planeta na-emeri ihe a niile m ga-enye gị na ọ bụ egwuregwu banyere "enweghi ntaramahụhụ na anyaukwu", n'okwu nke Redondo n'onwe ya.
Dolores Redondo: "Na Galicia enwere ebe nchụaja ebe ndị mmadụ na-aga tufuo ekwensu"
Dolores Redondo na-agabiga na Press Press nke Fairmont Juan Carlos I nkwari akụ na Barcelona na-enwe obi ụtọ na ike gwụrụ, na iko nke Coca Cola nke ọ na-anwa iji belata ụra ụra na nchapu ọkụ nke afụ ebe ọ nọworo ruo awa iri na anọ .
Dị ka okwu ya na nnọkọ ogbako ahụ, Ihe a niile m ga-enye gị, ọrụ ahụ zoro ezo n'okpuru aha aghụghọ nke Sol de Tebas na onye mmeri nke 2016 Planeta Prize, bụ akwụkwọ mpụ banyere enweghị ntaramahụhụ na anyaukwu e debere na ala dị omimi nke Galician Ribeira Sacra. Otu akụkọ malitere site na njirimara Lugo nke ozu Álvaro site n'aka di ya, Manuel, onye malitere ịchọpụta obere ndụ abụọ nke onye ọlụlụ ya site na enyemaka nke onye ụkọchukwu na onye ọrụ ezumike nka lara ezumike nká.
Akwụkwọ akụkọ: Olee otú obi dị gị?
Dolores Redondo: (ọchị) Amaghị m, dị egwu, Obi dị m ụtọ. M ka nwere mmetụta nke enweghị ọdịda na achọrọ m oge nzuzo na ịnọ naanị m iji nyochaa ihe niile mere m.
Ndị: Na zuru ike. . .
DR: Ee, mana karia izu ike ịsị "nke a emeela." Maka na ọ ka na-eme.
Ndị: Ikekwe mgbe oge gafere ma cheta ụbọchị a ị gaghị eme ya nke ọma.
DR: (Ọchị) Kpamkpam!
Ndị: Gwa m ihe a niile m ga - enye gị: olee otu o si dị iche na ihe niile ị degoro?
DR: Na mbu, abughi m onye ozo dere akwukwo ndi ozo. A tụụrụ ha niile site n'echiche dị iche, nke onye na-ejighị ọrụ aka ya dee akwụkwọ, ọbụlagodi na Onye nlekọta a na-adịghị ahụ anya. O doro anya na ọrụ ndị a ahapụla akara nke ndị na-agụ ya hụrụ. Mgbe ahụ enwerekwa ebumnuche maara ihe ịme ihe dị iche iche. Approachzọ mbụ, nke kachasị pụta ìhè, bi na eziokwu ahụ na Baztán trilogy ụmụ nwanyị na ọha mmadụ nwere mmeri, agbanyeghị n'oge a agara m n'akụkụ nke ọzọ, n'akụkụ nke ọzọ nke mba ahụ, gaa na mpaghara dị iche na omenala na ụzọ ndụ dị iche iche; ngụkọta nke ndị nna ochie nke Katọlik nwere mmetụta dị ukwuu.
Ndị: N'ezie, ndị na-akwado akwụkwọ akụkọ a bụ ụmụ nwoke.
DR: Ee, ha bụ ụmụ nwoke atọ dị iche iche na-eche ihu ihu abụọ, na-emekọ ọnụ site na otu ọchụchọ maka eziokwu. Obere ọbụbụenyi nke na-apụta nke nta nke nta ruo mgbe ọ na-amanye ha itinye onwe ha n'ọrụ nke na-agba ha ume ka ha na-aga n'ihu ọnụ na-achọ eziokwu ahụ.
Ndị: I kwuru na ọnọdụ a, na nke a Galician Ribeira Sacra, nwere mkpa pụrụ iche, ịbụ otu agwa. Kedu ebe kachasị bụrụ ihe na-akpali akpali nye gị na ọdịdị ala ahụ?
DR: Enwere m mmasị n'ebe a na-akpọ Belesar, ọdụ mmiri nke osimiri Sil. Ọ na-amasị m iji ụgbọ mmiri na-atụgharị osimiri ahụ na-atụgharị uche n'ubi vaịn ndị ahụ niile ga-erute n'ikpere mmiri. Ọ dị ịrịba ama, na-akpali akpali. Mara ihe di, na n'okpuru mmiri, e nwere obodo asaa juputara na mmiri ma ndị mmadụ ga-aga elu.
Ndị: Dị ka na Baztán trilogy, a ka nwere anwansi, ma na nke a ọ dị iche.
DR: Ee. Dị ka ọ dị na Baztán, na Navarra, achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ ikwu maka akụkụ anwansi ndị ọzọ n'ihi na echere m na ha na-efu efu na ọ bụ naanị site na echiche mmadụ wee kọọrọ ha. Ejiwo akụkọ mgbe ochie a mee ihe kwa ụbọchị.
Otú ọ dị, na Galicia mmetụta ahụ bụ ihe megidere, n'ihi na Galicia nwere njikọ chiri anya na meigas, ndị na-agwọ ọrịa, isiokwu ndị niile m gbapụrụ na m kpebiri ịghara ịgụnye. Ribeira Sacra nwere ụlọ ụka, ndị conven na Romanesque art kachasị na Europe niile. Okpukpe Katọlik na ụzọ ndị mmadụ si ebi na mpaghara ahụ nwere mmekọrịta dị iche n'etiti Catholicka Katọlik na ndị mmadụ na enwere ụfọdụ omume ndị na-anaghị eme ebe ọzọ na mba ahụ ka echekwara ha. N'adịghị ka anwansi nke Baztán, nke a dị oke egwu ma dị egwu. Ihe ndị a bụ nkwenkwe ndị so na okwukwe na nkwenye kwa ụbọchị. N'ọtụtụ ebe na Galicia, e nwere ọtụtụ ebe nsọ na otu n'ime ndị ụkọchukwu nke akwụkwọ akụkọ ahụ dị n'otu n'ime ha. Ndị mmadụ na-abịakwute ya ka ha chụpụ ekwensu. Anọ m ebe ahụ, nke ahụ dị adị ma na-eme kwa ụbọchị. Ndị mmadụ na-aga mgbe ha chere na ha ataala ahụhụ mmụọ ma enwere onye ụkọchukwu na-enweghị nsogbu ọ bụla, kwere ịgwọ ha. Amaghị m ihe ụkọchukwu nke ụka m ga-ekwu ma ọ bụrụ na m ga-arịọ ya ka o wepụ ekwensu n'ahụ m (ọchị). Ma, e nwere ya, ọ bụ ihe nkịtị, ọ bụkwa akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị. A pụghị ịkpọ ya anwansi, ọ ga-abụ enweghị nkwanye ùgwù, ọ bụ ụzọ dị ịrịba ama nke ibi ndụ n'okwukwe na-ahapụ oke oke ọchịchịrị ka ihe wee mee nke nwere ike ọ gaghị enwe nkọwa ezi uche dị na ya.
Ndị: Ọ bụ nkwanye.
Ndị: You maghịkwa ihe ị ga-akọwa.
DR: Kpọmkwem, gịnị ka ị na-akọwa ebe ahụ? Havekwesiri ịnakwere nkwanye ùgwù niile na enwere ndị na-aga yana ihe ndị a na-eme n'ụzọ zuru oke.
Río Sil, ebe nke kpaliri ihe a nile, aga m enye gi, site n'aka Dolores Redondo.
Ndị: Kedu ndụmọdụ ị ga - enye onye ọ bụla ga - achọ itinye akwụkwọ maka onyinye Planeta?
DR: M ga-adụ gị ọdụ ka ị ghara ime dị ka m na oge mbụ na ichere ruo mgbe ị nwere akwụkwọ ka mma. Ga-eji akwụkwọ kacha mma gaa mgbe niile. Karịsịa ma ọ bụrụ na oge mbụ ị na-ede, kwenye m, ị nwere ike ide ihe ka mma. Naanị site na idegharị ya ị ga-ahụ ihe dị iche n'ihi na ị mụtala, ị dee akwụkwọ ọgụgụ. Chee echiche na n'ime akwụkwọ mbipụta akwụkwọ, n'agbanyeghị eziokwu na anyị mechara chọpụta ọtụtụ ihe, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ n'ezie bụ ihe ịga nke ọma ị ga-achọ maka nke ọhụrụ, ha na-achọ ihe dị iche. Y’oburu n’icho maka ibuputa ihe edetu ma obu ihe ndi ozo na-eme, igaghi aga ebe di anya ma o nwekariri otu ohere iji nwe mmetuta mbu. Ọ bụrụ na i nwere akwụkwọ ọgụgụ ahụ ị kwenyere na ị nwere ike ime nke ọma, ewetala ya.
Ndị: Kedu ihe ị ga-eji ihe nrite ahụ?
DR: Ọkara maka Montoro, n'ezie (ọchị). Ma, dị ka ọtụtụ ndị nọ ná mba a, m nwere ndị nne na nna meworo agadi bi na obere ego ezumike nká na ụmụnne nwoke abụọ na-enweghị ọrụ. . . Abụ m nwanne nwanyị nke okenye na inye aka bụ ihe a na-ahụkarị m (ịchị ọchị).
Ihe niile a ka m ga-enye, site n'aka Dolores Redondo bụ ọrụ mmeri nke Planeta Prize 2016 anyị na-atụ anya inwe ike ịgụ ya na Actualidad Literatura n’ime izu ole na ole sochirinụ.
Yougụọla ọrụ Redondo?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ Dolores Redondo, onye mmeri nke onyinye 2016 Planeta
Mgbe Agha Worldwa Mbụ fọrọ nke nta ka ahapụ anyị na-enweghị "Onyenwe nke Mgbaaka"